Izinhlelo ezihamba phambili ze-Android Music Player Okufanele Uzame (2020) - Izinhlelo Zokusebenza
Izinhlelo ezihamba phambili ze-Android Music Player Okufanele Uzame (2020)
Kulezi zinsuku, abantu abaningi bomculo bangashintshela kuzinhlelo zokusebenza zamahhala zokusakaza umculo njenge I-Spotify , Pandora, I-Apple Music , ne-Google idlala umculo. Kepha kusekhona abanye abantu abalokhu belenga ekuqoqweni kwemidiya yabo yomculo ngoba ukusakazwa akubanele.
Uma nawe, uneqoqo lezindaba elingakwenzeli kahle, bese ubheka ukukhetha kwethu okukhethekile kwezinhlelo zokusebenza zesidlali somculo se-android ku-android. Ngakho-ke, nasi sihamba nohlu lwethu lohlelo lokusebenza lomculo we-Android Music.
Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili ze-Android Music Player:
Uma kukhulunywa ngokuba nezinhlelo zokusebenza zesidlali somculo ze-android ezingcono kakhulu ongazisebenzisa kumadivayisi we-Android, awudingi ukuthembela kuzinhlelo zokusebenza ezimbalwa zomculo ezilula. Uma ufuna ukudlulela kokulula, khona-ke lapha uzoba nenqwaba yezinketho. Sikusibekela zonke izinto, kusukela kuzinhlelo zokusebenza ezilula ezisuselwa emafini ezisuselwa kuzinhlelo zokusebenza zesidlali somculo esenziwe ngezifiso. Ngakho-ke, ake sithuthukise ulwazi lwakho lomculo ngokusebenzisa lezi zinhlelo zokusebenza.
1. Isidlali Somculo sePoweramp
I-Poweramp ingenye yezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zesidlali somculo se-android zabasebenzisi abaningi be-Android. Inezindikimba ezihlukile kanye ne-interface ebushelelezi, ongayilanda esitolo se-Google Play. Uhlelo lokusebenza lwesidlali somculo lufaka nezici eziningi zokudlala umculo, kufaka phakathi i-crossfade, ukudlala okungenasikhala, futhi isekela uhlu lokudlalwayo olukhulu kanye nokuxhaswa kwe-Android Auto. Uzothola izilungiselelo ezenziwe ngezifiso, ukuhlela amathegi, namawijethi.
I-AIMP esinye isidlali sohlelo lokusebenza lomculo se-android esisekela izinhlobo ezivame kakhulu zamafayela omculo, kufaka phakathi i-FLAC, i-MP4, i-MP3, namanye amafayela womculo. Abantu bomculo nabo bathola izingqikithi zokusingathwa, izinketho zokwenza ngokwezifiso, nezinye izinto eziningi ezimnandi njengalezo. I-AIMP inokujwayelekile kwevolumu, ukusakazwa bukhoma kwe-HTTP, isilinganisi esivelele, futhi kusetha izinhlelo zokusebenza zesidlali somculo esibalulekile. Ngaphezu kwalokho, uhlelo lokusebenza futhi lunenguqulo yedeskithophu uma ufuna ukudubula amadivayisi amabili ngohlelo lokusebenza olulodwa.
Lokhu kungenye yezinhlelo zokusebenza zesidlali somculo se-no-BS futhi inezici eziningi ezidingekayo, kufaka phakathi i-UI elula, usayizi omncane we-APK, kanye nokuhlangenwe nakho okungaxhunyiwe ku-inthanethi. Uhlelo lokusebenza lomculo lubuye lube nokulinganisa okuningi, ulayini amaningi, umhleli wethegi, amawijethi asekelayo, amagama ashumekiwe, nokuphequlula ifolda.
Lokhu kungaba inketho enhle kunazo zonke yabathandi bomculo abadinga uhlelo lokusebenza lwesidlali somculo oludlala umculo ngaphandle kwezinto ezingeziwe. Okuhamba phambili kumahhala ngokuphelele ukuze ukwazi ukujabulela umculo ngaphandle kokuthenga ngaphakathi nohlelo.
Isine. IPulsar Music Player
Manje, lolu hlelo lokusebenza lwesidlali somculo olungcono kakhulu ongalufinyelela manje. Kusuka ekwakhiweni kwezinto ezibonakalayo, ukudlala okungenazikhala, ukuhlela amathegi, izinhla zokudlalayo ezihlakaniphile, okokugcina. Ukuhlanganiswa kwe-FM, ukubhuqa, nesikhathi sokulala, uzoba nazo zonke lezi zici ezimangazayo. Kuyindlela enhle kakhulu kulabo abafuna abadlali bohlelo lokusebenza lomculo oluncane.
Noma kunjalo, i-pro-version yayo nayo ayibizi futhi ingeza kuphela izici ezimbalwa ezinhle kakhulu. Into ehlaba umxhwele kakhulu ukuthi kungukuthi inguqulo yamahhala futhi inguqulo ye-premium ayinazikhangiso.
5. I-PlayerPro Music Player
Uhlelo lokusebenza lesidlali somculo sePlayerPro ngesinye isidlali sohlelo lokusebenza lomculo esibalulekile esinezici ezihlaba umxhwele nesixhumi esibonakalayo esilula. I-interface elula yenza kube lula ukuyisebenzisa futhi ungafaka ngokunembile ukwenza ngezifiso okwengeziwe.
Ngokuhambisana nomculo, ibuye isekele ukudlala amavidiyo, i-android auto, i-equalizer band band engafani nokusekelwa kwe-Chromecast, amawijethi, imiphumela ehlukahlukene yomsindo, nezinye izici ezijabulisayo. Isidlali somculo sePlayerPro futhi sisekela umculo we-Hi-Fi futhi singathola idemo nge $ 4.99 nje.
6. I-BlackPlayer EX
I-BlackPlayer EX ingenye uhlelo lokusebenza lomculo womculo oluhle futhi olulula. Umuntu angenza ngezifiso futhi asebenze kusakhiwo sethebhu. Ngaphezu kwalokho, ine-scrobbling, amawijethi, i-equalizer, ayikho izikhangiso, umhleli wethegi ye-ID3, izingqikithi, nokusekelwa kwamafayela omculo ajwayelekile. Inenketho emnandi yabantu bomculo we-minimalism nokulula.
Okwamanje, inguqulo yayo yamahhala ayiphazamisi amathambo angenalutho ngenkathi inguqulo yayo ekhokhelwayo inikeza izici ezihlaba umxhwele kakhulu. Ngenhlanhla, i-pro-version yayo ayibizi ukuze ukwazi ukujabulela izinto zakho ozithandayo ngezindleko ezifanele.
IMediaMonkey singesinye isidlali sohlelo lokusebenza lomculo esihamba phambili se-android esinezici eziningi, kufaka phakathi ezinye izinto zenhlangano ezinjenge-podcast, ama-audiobooks, kanye nekhono lokuhlela ezinye izingoma ezisesha ngamagama womqambi.
Ngokwengeziwe, uhlelo lokusebenza lunezinto ezithile eziyisisekelo njenge-Equalizer, futhi ingavumelanisa ilabhulali yakho yomculo kusuka kwi-PC yakho iye ocingweni lwakho kunethiwekhi ye-wi-fi. Noma kunjalo, inokusetha okuncane okuyinkimbinkimbi kepha isekela izici ezihlaba umxhwele ezikwenza kube uhlobo lwayo.
8. JetAudio HD
IJetAudio iyisidlali sohlelo lokusebenza lomculo esiyintandokazi kubasebenzisi be-android ngoba inezici ezahlukahlukene ezihlaba umxhwele kodwa eziqondile. Lesi sidlali sohlelo lokusebenza lomculo sinezinhlobonhlobo zezithuthukisi zomsindo ezitholakala njengama-plugins ahlukile ukuthuthukisa umuzwa wakho womculo.
Ehlangothini le-flip, kuza ne-equalizer nemiphumela elula yomculo efana nomhleli wethegi, ukukhulisa ama-bass, amawijethi, kanye nokudlalwa kwe-MIDI. Uhlobo lwamahhala nolukhokhelwayo lufana ncamashi; umehluko kuphela ongenazikhangiso futhi unezindikimba ezihlaba umxhwele.
9. Umdlali weNeutron
Uhlelo lokusebenza lomdlali we-neutron kungenye isidlali sohlelo lokusebenza lomculo se-android esidumile kubantu. Inezici ezahlukahlukene, kufaka phakathi injini yokunikeza umsindo eyi-32/64 encike ngokuqinile ku-android naku-iOS. Lokhu kusiza ukuba umculo uzwakale kangcono futhi ucace.
Ibuye inezici ezahlukahlukene, kufaka phakathi izinhlobo ezihlukile zefayela, ukusingathwa kwezinye izici ze-audiophile, kanye nesilinganisi esakhelwe ngaphakathi. Noma kunjalo, kuyabiza kancane kepha kufanelekile kubasebenzisi befoni be-android.
Igilamafoni iwumthombo ovulekile wohlelo lokusebenza lomdlali we-android. Izibandakanya njenge-lightweight, interface elula futhi efinyeleleka kalula ngabasebenzisi. Ngaphandle kwalokho, ifaka i-UI yedizayini enhle kakhulu. Phezulu kwalokhu, ungathola inqwaba yamatimu ukuze ukwazi ukushintsha umculo ngendlela othanda ngayo.
Abasebenzisi bazophinda bathole izici ezifana nomhleli wethegi, ukuhlanganiswa kwe-FM, isici sohlu lwadlalwayo, iwijethi yesikrini sasekhaya, nezinye izici eziningi. Lokhu kungaba inketho enhle kakhulu yokulalela izingoma zakho ozithandayo ngaphandle kokuthola noma yini ewela endleleni. Okwamanje, into enhle yalolu hlelo lokusebenza ukuthi iyatholakala kubantu bomculo ngaphandle kokuthenga ngaphakathi nohlelo nge-Google play pass.
ishumi nanye. I-USB Audio Player Pro
Lolu hlelo lokusebenza luyinkosi yezinhlelo zokusebenza zalo zomculo. I-USB Audio Player Pro isebenza kahle njengesidlali somculo futhi iza nokudlala okuncane okungenasikhala, ukwesekwa kwe-UPnP, i-10-band EQ, ne-UI ekhangayo, esekelayo.
Lolu hlelo lokusebenza lomculo lungasekela kuphela kufika ku-32-bit, 394 kHz ngokusekelwa kwe-DSD, MQA, FLAC, SACD, namathani ama-codec alalelwayo. Futhi, isebenza ngokusobala ngokugqamile ngama-USB DACs nama-HiRes DACs njengawe kuma-smartphones e-LG. Yize uhlobo lwayo lwe-pro lubiza impela, kusesona isidlali sohlelo lokusebenza lomculo oluhamba phambili.
12. I-VLC ye-Android
Okokugcina, uhlu luyi-VLC ye-Android. Ithembekile futhi inamathani wevidiyo, uhlobo lwefayela lomculo olalelwayo, neMKV, FLAC, MP4, ne-OGG. Futhi, ama-junkies abezindaba angafinyelela ngokushesha ku-inthanethi ngokusakaza umculo obukhoma lapha. Ibuye ivumele amasheya ediski futhi isekele ama-DVD e-DVD kanye nemikhondo eminingi kanye nemibhalo engezansi.
Uzoba namathambo angenalutho okukuphazamisa kunguqulo yamahhala, kepha lokho kuzolunga ngokulalela umculo mahhala.
Ukulalela umculo owuthandayo noma kunini, noma kuphi, kungathuthukisa imizwa yakho kungakapheli umzuzwana. Manje unohlu lohlelo lokusebenza lomculo wabadlali be-android olungcono kakhulu ongalufaka ku-smartphone yakho futhi ujabulele izinto zakho zomculo ngaphandle kwezinkinga.
Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili zomculo
Amasayithi Womculo Avinjiwe - Lalela Umculo Nomaphi
U-Bob Ross: Izingozi Ezijabulisayo, Ukukhaphela Nokuhaha Sekulapha
I-UFL - Konke Esikwaziyo Kuze kube manje
Dating Life Rumors & His Relationship : Ingabe uRichard Madden Gay?
Ukufunda Isu Eliyisisekelo ku-Blackjack nokuthi Ungayisebenzisa kanjani.
I-Pottery Phonsa Phansi Isizini yesi-5 isilapha
Abawine phambilini be-King George VI Chase
I-Hope Solo Net Worth 2022: Yazi Kabanzi Ngempilo Yakhe Yakuqala Kanye Nomsebenzi Wakhe
I-Jojo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R Imenyezelwe Ngokusemthethweni ku-PC
Idethi yokukhishwa kwe-Dave Season 3: Cast, Plot & Updates!
Yini Oyaziyo Ngezinto Ezilungile Isizini 2?